Jabhadda ONLF oo 20 sano kaddib gaartay Jigjiga - BBC News Somali
Image caption Ciidammada ONLF ee maanta gaaray Jigjiga
Ibraahim Maxamed Beddel oo ah madaxa ciidammada ONLF ee cutubka maanta gaaray Jigjiga ayaa BBC-da u sheegay in mas'uuliyiinta ururka ee ku sugan dalka Eritrea ay dabayaaqada bishan gaari doonaan Jigjiga sii loo ambaqaado dhaqan gelinta heshiiskii dhexmaray iyaga iyo dowladda Itoobiya.
Image caption Ciidammada ONLF oo maanta lagu soo dhaweeyay Jigjiga
Cabdi Saxane Cumar oo ah abaanduulaha ONLF ee ka hawlgalayay gudaha Dowlad Deegaanka Soomaalida ayaa BBC-da u sheegay inay mabda'a iyo fikirka ay wateen uu ahaa inay u halgamayeen danta shacabka ayna ku rajaweynayeen inay gaaraan guusha.
Falanqayn: Maxay ku heshiiyeen ONLF iyo dawladda Itoobiya?
"Waxaan is leeyahay mustaqbal, nolol,horumar iyo midnimo ayaa xigi doontaa InshaaAllah" ayuu yiri Saxane.
Wuxuu sheegay in wax dhibaato ah aysan dhexmari doonin iyaga iyo ciidammada Dowlad Deegaanka ayna mid yihiin isla markaasna isbadallada ka dhacay waddanka Itoobiya ay u horseedeen in la gaaro heshiis nabadeed.
Image caption (Midig) Abaandduule ka tirsan ciidanka ONLF